Microsoft Edge တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
ဝဘ်ကို သင်ရှာဖွေနေသည့်အခါတိုင်း၊ သင်သည် ဖိုင် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အချိန်များစွာရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် သင်မကြည့်ရှုမီ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားရမည့် အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို သင်လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ အစောပိုင်းတွင် သင်သည် ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်သောအခါ၊ သင်သည် ဒေါင်းလုဒ်လမ်းကြောင်းသို့ ကိုယ်တိုင်သွားကာ ဖိုင်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက် ၎င်းကို တွဲဖက်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ဖွင့်ရပါမည်။ Microsoft Edge တွင်၊ သင်သည် အီးမေးလ်တွင် စာရင်းဇယားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် တင်ပြချက်များကို လက်ခံရရှိပါက သို့မဟုတ် အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များမှ ထိုဖိုင်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သည့်အခါ၊ နည်းပညာဟောင်းကို အသုံးပြုခြင်းထက် ၎င်းတို့ကို ဘရောက်ဆာမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်၏ Microsoft Edge ၏မိတ္တူတွင် ဤအင်္ဂါရပ်ကို သင်မည်သို့ဖွင့်နိုင်သည်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
အဆင့် 1. သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Microsoft Edge browser ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် 2. စခရင်၏အပေါ်ဘက်ညာဘက်ခြမ်းရှိ 'အစက်သုံးစက်' အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
ဘတ် Signal Messaging App တွင်မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
အဆင့် 3. စာရင်းကို ရွှေ့ပြီး 'ဆက်တင်များ' ရွေးစရာကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 4. ယခု၊ ဆက်တင်မီနူးတွင်၊ ဘယ်ဘက်အခြမ်းရှိ 'ဒေါင်းလုဒ်များ' ရွေးချယ်မှုကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 5. 'Open' ကို ဘရောက်ဆာရှိ 'Open Office ဖိုင်များ' ရွေးချယ်မှုဘေးရှိ ခလုတ်ကို ပြောင်းပါ။
ရွေးချယ်မှုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် သင်သည် ဘရောက်ဆာကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပြီး၊ ဤအင်္ဂါရပ်ကို စမ်းသုံးလိုပါက ပူးတွဲပါဖိုင် သို့မဟုတ် တင်ပြချက်၊ စာရင်းဇယား သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကာ ဘရောက်ဆာအတွင်း ဖိုင်ကို ဖွင့်ထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သင်သည် စာရွက်စာတမ်းကို ကြည့်လိုပါက အရာများကို အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ စာရွက်စာတမ်းကို တည်းဖြတ်လိုပါက သင့်လျော်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် ဖွင့်နိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော Google Earth ကို အသုံးပြု၍ လကို အတုအယောင် လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနည်း
နောက်တစ်ခု Microsoft Teams အစည်းအဝေးကို မှတ်တမ်းတင်ရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်း